Umama kaNcwane usola uMr Magic noMfundisi Dube ngokugxambukela | News24
Needs of the majority must be top priority
We need to learn from our fellow African countries leading the charge to become performers in the renewable energy space, writes Mamphela Ramphele.
Umama kaNcwane usola uMr Magic noMfundisi Dube ngokugxambukela
Durban - Usola lowo owayengumsakazi nongusomabhizinisi uLinda Sibiya noMfundisi Vusi Dube ngokugxambukela ezindabeni zakwaNcwane uNkz Fikile Ncwane.
UNkz Ncwane ongunina kamufi obengumculi wowokholo uSfiso Ncwane usola laba bobabili ngokuzifaka baze bagamanxe ezindabeni abangahlangene nhlobo nazo.
Unina kaSfiso uthi uxakwe yindlela laba abakhulume ngayo izindaba zakwakhe kwasengathi kukhulu abakwazi ngalo mndeni bebe bengazi lutho.
"Bangicasule kakhulu ngesikhathi bekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo kaSfiso ebisebandleni lakhe uDube eThekwini Community Church (ECC) lapho bethe mina mangivale umnyango wezintatheli. Ngake ngazivulela umnyango wakwami nini izintatheli mina? Ngiswele ithuba lokuziphendulela khona lapho ngoba bebekhuluma into abangenalo ulwazi ngayo nengadingi bona," kusho yena.
Uthi uyazi ukuthi lokhu bebekusho bekususela odabeni olwaba ngundabizekwayo lwefriji njengoba ayekhala ngokuthi indodana yakhe kayimondli, uyafa yindlala.
"Okokuqala nje izintatheli zaduka zaze zayobuya kwaQoloqolo zihambe zingifuna. Ukuba zazibizwe yimi ngangiyoziyalela zihambe zize zifike kwami. Engakukhuluma ezintathelini kwakuyiqiniso elimsulwa, ngingifile yindlala. Ngalelo langa nje ngangiphuma ensimini ngingazi nokuthi kuzolalwa kudliweni. Ngisho naye uSfiso wangishayela ngamtshela ukuthi mina bengikhuluma iqiniso mangithi ngiyafa yindlala," usho kanje.
Uthike kucasulile obese kukhulunywa yilaba bobabili bebe bengawazi umsuka wento abebekhuluma ngayo.
"Ukube bebefuna ukusilekelela njengomndeni ngabe basihlalise phansi basibuza ukuthi kwenzakalani, kungabe sekuthiwa mangivale umnyango wezintatheli," usho kanje.
Uthi nakho ukuthi ezinhlelweni zomngcwabo bese kuba yibo abahamba phambili kumcikile ngoba akazi ukuthi bangena kanjani ube umndeni kaSfiso ukhona. Uthi kumphethe kabi nokuthi unkosikazi kaSfiso u-Ayanda wenqabe ukuba isidumbu sendodana yakhe siyodlula ekhaya eMthwalume.
"Uhlulwe yini ukuletha umzimba wengane yami ngoLwesihlanu, ilale ekhaya. Sigcine sinomlindelo isidimbu singekho ngoba u-Ayanda enqabile," kusho yena.
Yize noma ebebophe iduku esifubeni uNkz Ncwane uthe uzozila ulinde izingubo zakhe zokuzila abezilindele ngoLwesine.
"Mina konke ngikwenza ngendlela esenza ngayo izinto lapha ekhaya, yingakho ngizoyizilela indodana yami," usho kanje.
Utshele leli phephandaba ukuthi usebatshelile onina bezingane zikaSfiso azithole ngaphandle komshado ukuthi mabenze abakubonayo, yena akazukuyingena eyamafa neyezondlo zezingane ngoba kayifuni yena.
Uthe yize noma abaningi babona sengathi wayephoxa indodana yakhe ngodaba lwefriji olwabikwa kwiLANGA, kodwa okuhle ngalo wukuthi lwaba nomphumela omuhle kakhulu, wagcina esenobudlelwano obuhle nendodana yakhe yize noma kungabanga yisikhathi eside.
"Sahlala phansi salukhuluma lolo daba. Ubesengondla nyanga zonke. Angazi -ke manje ukuthi sengizophila kanjani. Kuyacaca ukuthi ngangidalelwe ukuhlupheka. Impilo ibingcono kabi, indodana yami isinginakekela," kuphetha yena.